Mkpokọta ego | Okporo ụzọ Iji Mgbakwunye
Kedu mgbanwe azụmahịa dị n'okpuru ebe a bụ isi mmalite okporo ụzọ maka azụmaahịa mgbakwunye.Ndewo onye ọ bụla, Biko nyere m aka ịchọpụta azụmahịa kacha mma. Daalụ!
Ndị na-esonụ na-akọwa nkwụnye ụgwọ maka My okporo ụzọ blog website.
Babbel Language Learning Software - Mụta Asụsụ Spanish, French, Bekee, na Ọzọ - Asụsụ 14 ịhọrọ site na - Dakọtara na iOS, Android, Mac & PC (Ndenye ọnwa 12)
Anyị na-eme mgbalị niile iji hụ na anyị na-anọchi anya ngwaahịa ndị a na ọrụ na ego ha nwere. Nkwupụta ego na ego nke My okporo ụzọ blog na ndị ahịa ya bụ atụmatụ nke ihe anyị chere na ị ga-enweta. Enweghị nkwa na ị ga-eme ọkwa ego ndị a ma ị nabata ihe egwu dị na ego na nkwupụta ego dị iche iche.
Dịka azụmahịa ọ bụla, nsonaazụ gị nwere ike ịdị iche, ọ ga-adabere na ikike gị, ahụmịhe azụmaahịa, nka na ọkwa nke ọchịchọ gị. Enweghị nkwa ọ bụla gbasara ọkwa nke ịga nke ọma ị nwere ike ịnweta. Akaebe na ihe atụ ejiri mee bụ nsonaazụ pụrụ iche, nke na-anaghị emetụta onye zụrụ ihe, yana ebughị n'obi ịnọchite ma ọ bụ kwe nkwa na onye ọ bụla ga-enweta otu ihe ahụ ma ọ bụ ihe yiri ya.
Ihe ịga nke ọma onye ọ bụla dabere na nzụlite ya, nraranye, ọchịchọ na mkpali ya. Enweghị mmesi obi ike na enwere ike ịmegharị ihe atụ nke ego ndị gara aga n'ọdịnihu. Anyị enweghị ike ịkwado ọdịnihu gị na / ma ọ bụ ihe ịga nke ọma. E nwere ụfọdụ ihe egwu dị na azụmahịa na ịntanetị anyị enweghị ike ịhụ nke nwere ike belata nsonaazụ.
Anyị anaghị aza gị maka omume gị. Ojiji nke ozi anyị, ngwaahịa na ọrụ kwesịrị ịdabere na ntinye aka gị ma ị kwenyere na My okporo ụzọ blog enweghị ike ịdaba maka ihe ịga nke ọma ma ọ bụ ọdịda nke azụmahịa gị nke metụtara ma ọ bụ n'ụzọ na-enweghị nzụta na ojiji nke ozi anyị, ngwaahịa na ọrụ.
a website nwere ma ọ bụ nwere ike ịnwe “nkwupụta na-ele anya n’ihu” n’ime ihe nkebi nke 27A nke Iwu nchekwa nke 1933 na Nkebi nke 21B nke Iwu Exchange Securities of1934. Nkwupụta ọ bụla nke gosipụtara ma ọ bụ tinye mkparịta ụka gbasara amụma, atụmanya, nkwenkwe, atụmatụ, amụma, ebumnuche, ebumnuche, echiche ma ọ bụ ihe omume ga-eme n'ọdịnihu ma ọ bụ arụmọrụ abụghị nkwupụta nke akụkọ ihe mere eme na ọ nwere ike ịbụ "nkwupụta na-atụ anya."
Nkwupụta na-aga n'ihu na-adabere na atụmanya, atụmatụ na amụma n'oge a na-eme nkwupụta ndị ahụ gụnyere ọtụtụ ihe egwu na enweghị ntụkwasị obi nke nwere ike ibute nsonaazụ n'ezie ma ọ bụ ihe omume dị iche na nke ndị ugbu a. Enwere ike ịchọpụta nkwupụta ihu na omume a site na iji okwu dịka "atụ anya", "uche," "atụmanya," "atụmatụ," "kwere," ma ọ bụ nkwupụta na-egosi ụfọdụ omume "nwere ike," "nwere ike," ma ọ bụ “Nwere ike” ime.
Gbanwee OGO: Dị ka ọ bụla nke ibe nchịkwa na nchịkwa iwu anyị, ọdịnaya nke ibe a nwere ike ịgbanwe na oge. N'ihi ya, peeji a nwere ike ịgụ dị iche iche maka nleta gị ọzọ. Mgbanwe ndị a dị mkpa, ma ọ bụ nke m rụrụ okporo ụzọ blog, iji chebe gị na My Traffic Blog website. Ọ bụrụ na ibe a dị gị mkpa, ị kwesịrị ịlele ugboro ugboro n'ihi na ọ nweghị ọkwa ọzọ nke ọdịnaya gbanwere ga-enye tupu ma ọ bụ mgbe mgbanwe gbanwere.
NDỌ AKA NA NTOP KWES :R:: Akwụkwọ ọkwa iwu na peeji nchịkwa na nke a website, gụnyere nke a, onye ọka iwu depụtara ya nke ọma. Anyị na My Traffic Blog akwụgoro ikikere iji iwu iwu a na peeji nchịkwa na My Traffic Blog maka nchedo gị na nke anyị. Enwere ike iji ihe a n'ụzọ ọ bụla maka ebumnuche ọ bụla yana ejiri ikike na-egbu egbu site na Copyscape iji chọpụta ndị na-emebi iwu.
AJ QJ / / AJ /J / / CBCR CON: Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara ọdịnaya nke ibe a, ma ọ bụ naanị ịchọrọ ịbịakwute anyị maka ihe ọ bụla, ị nwere ike ịme site na isoro njikọ a: https://traffictoaffiliate.com